September 2020 - Page 8 of 8 - Nalonetardiary
သောကြာ သားသမီးလေး တွေကတော့ အရိုးသားဆုံး သူလေးတွေပါ… သူတို့ဟာ အရာရာကို အလေးအနက် ထားတတ်ကြတယ်.. အပျင်း မကြီးတတ်ဘူး… အစား မမက်ဘူး.. တခါတလေတော့ စကားပြောရင် တဖက်လူ နားညီးအောင် ပြောတတ်ကြတယ်.. မိသားစုအပေါ် အမြဲ အနစ်နာခံ တတ်တဲ့ သူတွေပါ….. သူတို့ဟာ ဘဝကို ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရင်ဆိုင်ရဲ ကြတယ်.. စိတ်တို လွယ်သလို စိတ်ပြေလည်း လွယ်တယ်…. ဒေါသမကြီးပေမဲ့ အငြိုးအတေး ကြီးတတ်ကြတယ်… တစ်ခုခုဆို ခံစား လွန်းတတ်တယ်.. မျက်ရည်လွယ်တယ်….. ကိုယ် ခံစားရတာတွေကို ဘယ်သူ့မှ ပြောမပြဘဲ တစ်ယောက်ထဲ ကျိတ်ခံစားတတ်တဲ့ သူမျိုး…. သိုသို သိပ်သိပ် နေတတ်ကြတယ်… လောဘမကြီးဘူး…… အချစ်ကြီးသလောက် အချစ်ရေးမှာ ကံမကောင်းဘူး…. ကိုယ်ချစ်တဲ့သူက… ကိုယ့်ကို … Read more
Categories Horoscropes Tags သောကြ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ၿမိဳ႕နယ္ (၇) ခုကို Semi Lockdown ခ်၊ လိုက္နာမႈမရွိလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္
September 1, 2020 by Nalonetar Diary
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲက မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်ကို Semi Lockdown ချလိုက်တယ်လို့ အစိုးရက ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့နယ်တွေကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ အင်းစိန်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သာကေတ၊ လှိုင်၊ ပုဇွန်တောင်နဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီမြို့နယ်တွေမှာ နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Stay at Home အစီအစဉ်ကို ကျင့်သုံးကြဖို့နဲ့ အမိန့်ကြေညာချက်ဟာလည်း စက်တင်ဘာ (၂)ရက်နေ့ မနက် (၈)နာရီကနေ စတင်အသက်ဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ညွှန်ကြားချက်တွေကို မလိုက်နာရင်တော့ တည်ဆဲဥပဒေတွေအရ အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကလွဲပြီး ကျန်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ အိမ်မှာပဲနေထိုင်ရမှာဖြစ်သလို မဖြစ်မနေဈေးဝယ်ထွက်ရင် တစ်ယောက်ထဲသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆေးရုံဆေးခန်းသွားတဲ့အခါ တစ်အိမ်ကို (၂)ယောက်ပဲသွားဖို့ နေအိမ်အပြင်ထွက်ရင် နှာခေါင်းစည်း (Mask) တပ်ဖို့နဲ့ … Read more
Categories Local News Tags ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က
ေဆးျဖစ္ေပမဲ့ ေဘးလည္းျဖစ္ေစတတ္လို႔ သိထားသင့္ေသာ ေဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ားရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
နွယ်မြက်သစ်ပင်ဆေးဖက်ဝင်ဟု ဆိုသော်လည်းလောကနိယာမ သဘောအရ အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ အမြဲဒွန်တွဲလျက် ရှိနေကြစမြဲပါ။ တချို့သစ်ပင်တွေမှာလူသားတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အားသာချက်တွေ တော်တော်များများရှိကြပါတယ်။ သို့သော် လူတစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ကြံ့ခိုင်မှုစွမ်းရည်ချင်း မတူညီကြတာကြောင့် ၎င်းအပင်တွေရဲ့ ဆေးဝါး များဟာ ကိုယ်ထဲကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးသားစနစ်နဲ့ အပြောင်းအလဲကို ဖြစ်စေတတ်တာကြောင့် သတိပြုသုံးစွဲတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ သို့ပါ၍ သတ်မှတ်ဖော်ညွှန်းထားသော ပမာဏထက်ပို၍ မမှီဝဲ မသုံးစွဲသင့်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း အသိပေး မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ (၁) ရှားစောင်းလက်ပပ် (က) ရှားစောင်းလက်ပပ်ပင်၏ ဂျယ်လီ (အနှစ်) ထဲတွင် ပါဝင်သော အောက်ဆီဂျင်ဓာတ်တစ်မျိုးက အရေပြားပေါ်ရှိ ဆဲလ်များကို အလိုလို ပြုပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် မီးလောင်နာ၊ အရေကြည်ဖုနာ၊ ထိခိုက်ရှနာ၊ နေလောင်ဒဏ်ရာတို့ကို ကောင်းစွာကုသပေးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ခွဲစိတ်အနာ ချုပ်ရိုးများ ကိုတော့ အနာကောင်းစွာမကျက်သေးခင်မှာ မလိမ်းသင့်ပါဘူး။ အနာကျက်နှေးသွားစေပါတယ်။ … Read more
Categories Food, Hearth Tags ဆးဖက္ဝင္အပင္မ်ား
မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲကံထူးရွင္ ..
ကျပ်သိန်း၁သောင်း၅ထောင်ဆုရှင် ရွှေမြန်မာမှ (၉)ကြိမ်ဆက် သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆုကြီးကို စံချိန်တင် ထပ်မံဆွတ်ခူး။ ရွှေမြန်မာမှ (၁၉)ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲတွင် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းငါးထောင်ဆုကြီး ပ 307666 ကံထူးရှင် ဒေါ်ယမင်းစံ လိုင်း(ခ)၊ အခန်း(၁)၊ သရက်မြိုင်ရဲရိပ်သာ၊ စွယ်တော်လမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ (ရွှေမြန်မာ ရတနာမိုးထီဆိုင်ကြီး) Zin Min Tun Zawgyi က်ပ္သိန္း၁ေသာင္း၅ေထာင္ဆုရွင္ ေ႐ႊျမန္မာမွ (၉)ႀကိမ္ဆက္ သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆုႀကီးကို စံခ်ိန္တင္ ထပ္မံဆြတ္ခူး။ ေ႐ႊျမန္မာမွ (၁၉)ႀကိမ္ေျမာက္ထီဖြင့္ပြဲတြင္ က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းငါးေထာင္ဆုႀကီး ပ 307666 ကံထူးရွင္ ေဒၚယမင္းစံ လိုင္း(ခ)၊ အခန္း(၁)၊ သရက္ၿမိဳင္ရဲရိပ္သာ၊ စြယ္ေတာ္လမ္း၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ (ေ႐ႊျမန္မာ ရတနာမိုးထီဆိုင္ႀကီး) Zin Min Tun
Categories Local News Tags ကျပ်သိန်း၁သောင်း၅ထောင်
ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းမ်ားအား လစာ ၂ လစာ အတိုးမဲ့ ထုတ္ေခ်းမည္ ..
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ စီမံကိန် နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)များကို လစ၁( ၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၂)လ၈၁ ကြိုတင်ထုတ်ပေးပြီး အတိုးမှုဖြင့် ထုတ်ချေးနိုင်ရန် အမှန်လိုအပ်ငွေစာရင်း ပေးပို့ရန်ကိစ္စ အကြောင်းအရာ၊ ရည်ညွှန်းချက် ။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌ၁န၊ ပြည်လောင်စုဝန်ကြီးရုံး၏ ၃၁ – ၈ – ၂၀၂၀ ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၈၇၈ ဘ၀- ၄/ n အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်သည့် သက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားနိုင်ရေးအတွက် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း (အမြဲတမ်း)များကို လစခ(၂ )လစာ ကြိုတင်ထုတ်ပေး၍ သတိုးမဲ့ချေးငွေဖြင့် ဆိုင်းငံ့လူလ(၆ )လ ၊ ပြန်ဆပ်ကာလ(၁)နှစ် … Read more
Categories Local News Tags ၂ လစာ
ဆရာမင်းသုခရဲ့ စက်တင်ဘာ တစ်လစာ ဟောစာတမ်း 1.9.2020မှ 30.9.2020ထိ
တနင်္ဂနွေ သားသမီးအတွက် တနင်္ဂနွေနေ့သားသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အောင်မြင်မှုနှင့် ကြုံတွေ့မည်။ဆရာကောင်းမိတ်ဆွေများနှင့်ဆုံမည်။ မမျှော်လင့်ထားသောအကူညီများရရှိမည်။ ဤလတွင် အလုပ်နှစ်ခု တစ်ပြိုင်နက်တည်းမလုပ်သင့်ပါ၊ တစ်ပိုင်းတစ်စဖြစ်တတ်သည်။ အပြိုင်အဆိုင်မနာလိုသူပေါများမည်။ ခရီးရှည် ရက်ရှည်ခရီး မထွက်သင့်ပါ။ သူများဦးစီးသောခရီးဝေး မထွက်သင့်ပါ။ အစားအသောက်မှား၍ အစာအဆိပ်သင့်တတ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဝမ်းဗိုက်နှင့်ပတ်သက်၍ အထူးဂရုစိုက်ပါ။ ချစ်သူနှင့်အိမ်ထောင်မရှိသူများ ချစ်သူ ရည်းစားအသစ်ရမည်၊ အိမ်ထောင်သည်များ သားသမီး ရတနာထွန်းကားမည့်လဖြစ်မည်။ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေမည့်လဖြစ်သည်။ ဤအချိန်တွင် အည့ံများပြေပျောက်စေရန် ယတြာ အိုးတစ်လုံးတွင်သဲအပြည့်ထည့်ပီး ရေအနည်းငယ်လောင်းပါ၊ ပီးလျှင် ရွှေထီး၊ ငွေထီးစိုက်၍ ဘုရားတွင်လှူပါ။ မိမိလိုရာ ဆုကိုတောင်းပါ။ တနလာင်္ သားသမီးအတွက် ဤလအတွင်း ဘယ်သွားသွား၊ ဘယ်လာလာ မိမိထက်ကြီးသူ၊ ငယ်သူနှစ်ဦး ဒုက္ခပေးမှုကိုခံရမည်။ မိမိရဲ့အတွင်းကိစ္စများသူတစ်ပါးကို မတိုင်ပင်ကောင်းပါ။ ငွေရေးကြေးရေး အချေးအဌားအကျိုးမပေးပါ။သူတစ်ပါးအတွက် အာမခံပေးတာတာဝန်ယူပေးတာအကျိုးမပေးပါ။သူများကိစ္စ မိမိကိစ္စဖြစ်တတ်သည်။ ရပ်ဝေးမှ သတင်းကောင်းကြားရမည်၊ … Read more
Categories Horoscropes Tags စက္တင္ဘျ
(၁၉)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဉ်တိုက်ရန် (အစ/အဆုံး)
(၁၉)ကြိမ်မြောက် သိန်းတစ်သောင်းခွဲအထူးဆုကြီး / သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲအထူးဆုႀကီး ပ ၃၀၇၆၆၆ သိန်းတစ်သောင်းဆု / သိန္းတစ္ေသာင္းဆု သ ၈၂၈၇၀၉ သိန်းငါးထောင် / သိန္းငါးေထာင္ ဋ ၆၅၇၅၅၁ စ ၉၁၁၉၇၃ သိန်းနှစ်ထောင် / သိန္းႏွစ္ေထာင္ ဓ ၂၈၄၉၀၆ ဘ ၇၅၀၈၉၃ ပ ၁၀၀၈၈၇ ကဂ ၉၂၆၇၈၉ သိန်းတစ်ထောင်ဆု / သိန္းတစ္ေထာင္ဆု ဟ ၅၀၈၈၈၄ ယ ၆၅၃၄၇၂ ဆ ၄၅၁၅၀၈ ဂ ၇၉၈၁၃၈ ဖ ၄၇၅၇၃၃ ဋ ၆၈၅၈၃၅ ဆယ်သိန်းမှသိန်း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာ အားလုံးအစဥ်လိုက်တူမှရမည် လွဲရင်ဘာမှမရပါ / ဆယ္သိန္းမွသိန္း (၁၅၀၀၀)ဆုအထိဟာ အားလုံးအစဥ္လိုက္တူမွရမည္ လြဲရင္ဘာမွမရပါ ဝေဝေဆာဆာပဒေသာ(၃)သိန်းဆု အက္ခရာနဲ့ရှေ့ဂဏန်း(၅)လုံးအစဥ်လိုက်တူရမည် … Read more
Categories Local News Tags ထီေပါက္စဥ္